Bupu ụgbọ m gaa United Kingdom | Importgbọ M Mbubata
Mbupu ụgbọ ala gị
TO ALAEZE UNITED Shippingzọ zuru ezu nke mbupu ụzọ nke ndị na-anụ ụgbọ ala na-arụ nke ghọtara ihe ụgbọ gị pụtara nye gị.
Anyị nwere nnukwu netwọkụ nke ndị mmekọ mbupu & ngwa agha
Nye anyị ebe ụgbọ gị nọ n'ebe ọ bụla n'ụwa ma anyị ga-ahazi nchịkọta na ọdụ ụgbọ elu mba kacha nso ma ọ bụ ọdụ ụgbọ elu mgbe ahụ, anyị ga-ahazi ụgbọ njem kwesịrị ekwesị maka ụgbọ gị na UK.
Dabere na ọnọdụ nke ụgbọ gị ga-agbanwe otu esi ebugharị ụgbọ gị na United Kingdom. Anyị na-ebugharị mbupu ụgbọ mmiri maka ụgbọ gị ma kwụọ ụgwọ n'oge okike iji nye gị ọnụahịa kachasị mma. Enweghị ndị na-atụpụta ụgbọ mmiri na-adọrọ mmasị ebe a ka anyị na-anwa iji ụgbọ mmiri ekpokọtara ebe enwere ike ịfefe gị ego ahụ. N'adịghị ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ebugharị ụgbọ mmiri, anyị bụ ụlọ ọrụ ndebanye aha mbụ - yabụ anyị na-eme ka nkwupụta anyị kwalite ụgwọ ego ịbubata n'ụgbọala gị.
Ebe anyị na ọtụtụ ụlọ ọrụ rụkọrọ ọrụ ọtụtụ afọ iji nyere aka na ụgbọ ala na-agagharị, ọ nweghị ihe anyị na-agaghị enyere aka ịkwaga United Kingdom n'ụzọ kachasị dị nchebe, yana iji ebufe oge niile na ụwa niile anyị nwere netwọkụ sara mbara dị ka mba ndị ọzọ ụlọ ọrụ na ahịa.
INLỌ AHINE ỌR MAR
Ihe niile anyị na-ekwu na-agụnye mkpuchi mmiri iji kpuchie ụgbọ gị n'okwu a na-adịghị ahụkebe enwere ihe ọghọm metụtara ụgbọ gị.
AIR, ala, oké osimiri.
Anyị na-enye ụzọ dị iche iche iji ibugharị ụgbọ gị. Ọ bụrụ n ’ime ọsọ ọsọ ma ọ bụ na ị na - ebugharị ihe dị oke ọnụ ahịa, ikuku na-ebu ibu mgbe niile. Ọ bụrụ na ụgbọ gị dị nso na EU enwere ohere dị ukwuu na a ga-enyefe ya na onye njem, yana maka ụgbọ ala ndị gafere oke osimiri, anyị nwere ike ịhazi maka mbupu. Ya mere echegbula ebe ụgbọ gị nọ, anyị ga-enweta ya ebe a.
AKOGROG AKW LKWỌ LIASON
Anyị na-edozi ihe niile maka gị ka ị wee ghara inwe. Nke a pụtara na ịnwere onye ị ga - enyere aka oge niile njem njem gị gaa United Kingdom.
Gụọ ajụjụ mbupu anyị na-ajụkarị maka ozi ndị ọzọ gbasara usoro a
Anyị emela ike anyị niile ịza ajụjụ ọ bụla ị nwere. Mana ọ bụrụ na ihe ọ bụla agbagharala anyị, biko egbula oge ịkpọtụrụ!